के होला कक्षा १२ को परीक्षा ? - bampijhyala.com
Home > पत्रपत्रिका > के होला कक्षा १२ को परीक्षा ?
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कक्षा १२ को परीक्षा आन्तरिक मूल्यांकनबाट गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रश्नपत्र नै तयारी गरिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले नै आन्तरिक मूल्यांकनबाट परीक्षा लिन पत्राचार गर्ने बताएपछि शिक्षा मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनकाे बैठक बस्दै १९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०७:२५
१ हजार २ शय ५१ जना सङ्क्रमित थप, १ हजार ६ शय ३० जना निको १९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०७:२५
परराष्ट्रमन्त्री खड्काद्वारा पदभार ग्रहण १९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०७:२५
Saptari snakebite kills2kids १९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०७:२५
विराटनगर भन्सारले एक वर्षमा चालीस अर्ब राजस्व संकलन १९ श्रावण २०७८, मंगलवार ०७:२५